Sezvo zvirambidzo zvekufamba kweUS zvadzikira, nzendo kubva kuUK dzichakwira nemamirioni gumi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Sezvo zvirambidzo zvekufamba kweUS zvadzikira, nzendo kubva kuUK dzichakwira nemamirioni gumi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mune imwe ongororo ichangobva kuitwa, makumi mashanu neshanu muzana evapinduri vepasirese vakaburitsa pachena kuti zvivakwa zvekuparadzaniswa nevamwe ndidzo dziviriro huru pakufamba kwenyika dzese, pamwe ne58% vachiti vachadzorwa nezvirambidzo zvekufamba.
Shanyira shamwari nehama (VFR) vafambi vangangotungamira kudiwa muchikamu chekukurumidza chekudzoreredza.
VFR yekufambisa yakagadzirirwa kuwedzera pamubatanidzwa wegore rekukura mwero (CAGR) we24.8% pakati pa2021 na2024.
Ndege dzekuUK-US dzakatemerwa kusimudzira kufambiswa kwekufamba pakati penyika mbiri sezvo kudiwa kwendege kuchiwedzera.
Chiziviso chekuti US marambidzo ekufamba kwevakabaya vachengeti veku UK vachazorodzwa kubva kutanga kwaNovember ichasangana zvakanaka nevanhu vanoda kusangana zvakare nemhuri neshamwari. Huwandu hwevanhu vanofamba kubva kuUK kunoshanyira shamwari nehama (VFR) hwakagadzirirwa kusimuka kubva pamamiriyoni gumi nezviuru muna 10.6 kusvika 2021 mamirioni na20.5 - inoyevedza 2024% CAGR. Aya anongova mashoko akanaka ekushanya kweUS, ayo anozobatsirwa nekuwanda kwevashanyi vekuUK.
VFR kufamba kunogona kutungamira kudiwa munguva pfupi iri kutevera sezvo zvirambidzo zvekufamba zvinotanga kureruka uye kudiwa kwepent-up kukiyiwa. Muchokwadi, VFR inotarisirwa kuwedzera padanho rakakura kupfuura kuzorora, izvo zvisina kujairika sezvo pre-COVID yekuzorora yaive yakanyanya kudiwa kupfuura VFR. Kufunga nezveVFR yekufambisa kudiwa kungave kungwara kwekufamba kwevaviri UK uye US nendege, sevafambi vekuUK vanotarisa kuti vadzokerane zvakare nevadiwa vavo mushure memwedzi yekuparadzana.
Kukahadzika pakufamba kunogona kuchinja nekureruka kwekurambidzwa kwekufamba uye kwega zvido. Kubva kutanga kwaNovember, wakazara jekiseni UK vafambi vanozokwanisa kudarika zvivakwa zvekuparadzaniswa uye vanotarisana nemabatirwo ekufambisa mashoma pavanopinda muUS. Ivo vachadaro, zvakadaro, vachiri kuda kupa humbowo hweyakaipa bvunzo mugumo kwete anopfuura mazuva matatu vasati vafamba kana humbowo hwekupora kubva kuCOVID-19 mumwedzi mitatu yapfuura.
Kuzorora uku kunogara zvakanaka kune avo vanoda kuenda kunze kwenyika. Iyo US yakagara iri nzvimbo inozivikanwa kune vashanyi veUK uye ongororo yeindasitiri inoratidza kuti iyo US yaive yechishanu inonyanya kufarirwa kuenda kune dzimwe nyika mu2019.Ine zvirambidzo kurerutsa zvinogona kuburitsa pent-up kudiwa uye kupa yakawanda inodiwa mari kumakambani ekufambisa.
Ndege dzakananga dzinogona zvakare kutora chinzvimbo mukugadzira yakawanda-inodiwa mari uye nekuwedzera kwehuwandu hwendege.
UK-bhesi dzendege dzine simba US hurongwa hwekufamba nendege, kusanganisira British Airways neMhandara Atlantic, vataura mafashama ari kudiwa kwendege kuUS. Ndege dzakananga dzinogona kufarirwa nevafambi sezvo vachibvumira chiitiko chinonzwisisika chakachengeteka pane kubatanidza kuburikidza nehubhu.